Hamro Kantipur | अल्लारे उमेरको त्यो प्रेम आज अपरिपक्कताको गलत नतिजामा कथित छ ! अल्लारे उमेरको त्यो प्रेम आज अपरिपक्कताको गलत नतिजामा कथित छ !
अल्लारे उमेरको त्यो प्रेम आज अपरिपक्कताको गलत नतिजामा कथित छ !
भारी नोट र मोजमस्तीकै लागि बनाइएको हो भने प्रेम । देखावटी र बेदनामा रम्न बनाइएको हो भने त्यो प्रेम ।
बात गर्ने मन हुँदाहुँदै बिछोडिन बनाइएको हो भने प्रेम । वाचा एकसँग अनि जीवन अर्कोसँग विताउन बनाइएको हो भने त्यो प्रेम । पर्दैन आफैसँग लैजाउ तिम्रा ती बेमेल याद र पिडादायी सम्झनाहरु । यदि तिमी मान्छौ भने बस यहि भन्छु अन्तिम पटक नै सहि यकपल्ट पहिले जसरी मुस्कुराइदेउ जुन तिम्रा फिक्का हासोमै म कुनैबेला मन्त्रमुग्ध हुन पुन्थे ।।
कसरी यति सजिलै फ्याक्न सक्छौ र हृदयका हर इन्द्रिय भावनासँग जोडिएका ती अनमोल उमंग र आशाहरु । कसरी यति सजिलै मेट्न सक्छौ र तिमी ! तिम्रा अन्जान गोरेटोहरुले भाजो हालेर कोरिएका ती अतीत । जिन्दगीमा एक बन्द भएर हजारौं बाटो खुलेका थिए, तर मेरा दुर्बल पक्ष त्यहीँ पथ चुन्न पुगे जुन पथ म र मेरो भविष्य सिस्ध्याउन काफी थिए । खोक्रो आडम्बरले भरिएको बथानमा पवित्र पुष्पवृष्टि गराउन चाहन्छौ भने सोध मलाई स्वार्थरहित चोखो प्रेम के हो ? म बताउने छु त्यसले दिने आशा अनि पिडादायी अहम हिस्साका त्रुटिपूर्ण अपवादहरु ।।
हरियाली वनपाखालाई लमि बनाएर पिरती गासेकालाई नसोध त्यसका भाका र अज्ञात भाषाहरु । घरपरिवार र समाजबाट घृणित हुने त्रासकाबीच समाइएका ती तिम्रा प्रेमपत्र अनि अनेकै रस्साकस्सीको माहोलमा आफ्नैको चलखेलमा टुंगिन बाध्य त्यो अमर कहानी । हिजो जस्तो लाग्ने त्यो विगत आज फर्केर हेर्दा दशकौं बितिसकेछ । अझै समेट्ने मन थियो ती बिचलित प्रेम जोडीलाई तर थुप्रै वसन्त, मुस्किल परिस्थिति अनि अमुल्य समयले यो निर्धो तनलाई थोत्र्याइसकेछ ।।
माया र अटुट भरोसा भएर पनि एक हुने वातावरण थिएन । बिस्तारै लर्बराइरहेका थिए ती कच्चा विश्वासको लामो यात्रा । सायद हामी हाम्रा सम्बन्धका अगाडी निर्लज्ज झुकिसकेका थियौँ । थाहा थिएन र अझै छैन पनि यो दिलमा किन तिम्रा लागि एउटा छुट्टै सफ्ट कर्नर छ । जहाँ कता कता सधैं तिम्रो अभाव झल्किरहन्छ । सबै सम्पन्नताकाबीच त्यहीँ अभावले अनेकौं प्रहरका प्रश्न उब्जाइरहन्छ । समयले धेरै पर धलिसकेछ अब जसको जवाफ चाहेर पनि न त जायज हुनेछ न त प्रमाणित । अल्लारे उमेरको त्यो मेरो प्रेम आज अपरिपक्कता र अन्जानको गलत नतिजामा कथित छ ।।
सायद बाँकी सम्बन्ध अघि बढाउने हिम्मत ममा पनि थिएन अनि तिमिले चाहेर पनि अघि बढाउने प्रयास गरेनौं । सामान्य हाई हलोबाट सुरु भएर शारीरिक लसपसमा सकिने आजका बिल्पारी सम्बन्ध भन्दा कति बलियो थियो त्यो सम्बन्ध । मेरै घरको आँगनीको डिलबाट शुरु भएको तिम्रो वैदेशिक यात्रा आखिर छुट्टिनुको प्रबल कारण पनि थियो । मन मस्तिष्क नजिकै भए पनि तिमी विदेशिएपछिको हालखबर र भौतिक व्यस्ततामा सिमित रहन नसकेका भावनाका ती भयानक बाढीहरु । जसले हामीबीचको दुरि सधैं वारि पारीमा परिणत गरिदियो । संयोगमा सिमित ती दुरिको मिलनबिन्दु अब केवल सपनामा मात्र सम्भव रह्यो ।।